raha ny nambaran’ny filohany, ny Profesora Sammy Grégoire Ravelonirina, omaly. Amin’ny maha olompirenena sy maha mpampianatra mpikaroka kosa anefa, hoy izy, dia tsy maintsy maka vahaolana sy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana hanenjika ireo nahavanon-doza. Tsy niteniteny foana anefa, hoy izy, ny Seces raha nilaza fa toerana maro teto Madagasikara no nisehoan’iny fivoahana laza adina mialoha iny. Fitiavana tsy te hanan-dratsy no hanoloran’ny Seces hevitra hoe aleo averina ny fanadinana ary ovana manontolo ireo tomponandraikitra nandray anjara. Tsy manana olana afa-tsy ny fahasimban’ny fanadinam-panjakana izahay. Miombona alahelo amin’ny mpianatra sy ny ray aman-dreniny izahay tamin’iny toe-draharaha tsy fiseho masoandro iny. Ankasitrahana ny finiavan’ny filoham-pirenena vahaolana saingy tsaratsara kokoa raha vahaolana tsy hiverenan’ny olana, indrindra, tsy hisoketana ny diplaoma ho ravahan’ireo mpianatra no omena, hoy hatrany ny tenany. Raha ny tsiliam-baovao heno moa ankoatran’izay dia ahiana sy andrasana ny fisiana ampamoaka ho ataon’ity rafitra ity mikasika izay fanadinana Bakalorea manerana ny nosy izay.